ကြက်ခြေနီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများစု အသက်အာမခံကြေး မပေးသွင်းနိုင်ကြ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > ကြက်ခြေနီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများစု အသက်အာမခံကြေး မပေးသွင်းနိုင်ကြ
ကြက်ခြေနီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများစု အသက်အာမခံကြေး မပေးသွင်းနိုင်ကြ	ကျော်ဖုန်းကျော်	| သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၁ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမာခံ ကြက်ခြေနီ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၁,၀၀၀ ကျော် ရှိသည့်အနက် ၂,၅၀၀ကျော်ကသာ တနှစ်လျှင် ကျပ် ၁,၀၀၀ သာ ပေးသွင်းရသည့် အသက် အာမခံကြေးကို ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း (MRCS) မှ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဌာနမှူး ဒေါ်ခင်မျိုးမြတ်သိန်း က ပြောသည်။“အသက်အာမခံတောင် မရှိဘဲ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ရတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဌာနချုပ်ကလည်း ငွေမတတ်နိုင်လို့ အသက်အာမခံကြေးကို သွင်းမပေးနိုင်ဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လျှင်လည်းကောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်လျှင်လည်းကောင်း အရေးပေါ် တုံ့ပြန် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် တမြို့နယ်လျှင် ၃၅ ယောက် နှုန်းဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ အမာခံ ကြက်ခြေနီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု MRCS မှတဆင့် သိရသည်။၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သော နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်စဉ်က ကြက်ခြေနီ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့သဖြင့် ၎င်းဝန်ထမ်းများ အတွက် အသက်အာမခံ ထားရှိပေးရန် လိုအပ်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေါ်ခင်မျိုးမြတ်သိန်း က ပြောသည်။ထို့ကြောင့် MRCS က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့မှ အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အမာခံ ကြက်ခြေနီစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် တနှစ်လျှင် မြန်မာငွေ ကျပ် တထောင်သာ ပေးသွင်းရသော အာမခံစနစ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါအသင်းမှ သိရသည်။စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် အာမခံကြေးကို MRCS မှ မပေးသွင်းနိုင်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများမှ ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများထံ လိုက်လံ အကူအညီ တောင်းခံလျှက်ရှိသည်ဟု လည်း MRCS က ဆိုသည်။အဆိုပါ အာမခံကြေး နှစ်စဉ် ပေးသွင်းထားပါက ကြက်ခြေနီ ဝန်ထမ်းသေဆုံးလျှင် မြန်မာငွေ ကျပ် သိန်း ၃၀ ခန့်နှင့် ညီမျှသော ဆွစ်ဇာလန် ဖရန့်ငွေကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိလျှင် ဆေးကုသစရိတ် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။၎င်း အမာခံ ကြက်ခြေနီများသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း သက်သက်သာ ဖြစ်ကြပြီး လုပ်ခလစာ မရရှိကြပေ။
မော်တော်ယာဉ် ဈေးကွက် ပုံမှန်အရောင်းအဝယ် ပြန်ရှိလာ
KNPP နှင့် အစိုးရ သဘောတူညီမှု တချို့ရ၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆွေးနွေးမည်
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး အဆင့်မြင့် ပညာသည်များ မွေးထုတ်ရန် လိုအပ်
နှစ်လကျော်ကြာ မြှုပ်နှံထားသည့် အလောင်းကို ပြန်ဖော်စစ်ဆေး
ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီမောင်းသူကို ဓါးဖြင့်ထိုးပြီး ဆိုင်ကယ်လုယူထွက်ပြေးမှုဖြစ်
အကြွေးဖြင့် ပေးအပ်ထားသော လယ်မြေပေါ်တွင် မူလပိုင်ရှင်က လယ်ပြန်ထွန်
အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များကို ကားအစီး ၈ဝဝ ခန့် တင်သွင်းခွင့်ပေး
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၃ ရက်အတွင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်လာဖွယ် ခန့်မှန်း	စစ်တွေ လေဆင်နှာမောင်း ပျက်စီးမှု အချို့ရှိ	ရခိုင်မြောက်ပိုင်းသို့ မုန်တိုင်းငယ် ဝင်နိုင်ဟု သတိပေး	ဘဏ္ဍာရေး ကျပ်တည်းသဖြင့် ရေဘေးကူညီနိုင်မှု အားနည်းဟု NLD ပြော	မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်း မိုးများနိုင်	ကျန်းမာရေးနှင့် အစားအသောက် ICRC ကူညီစေလို	ဘန်ကီမွန်း ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူး ပြန်ရွေးခံရ	Who is Online
We have 124 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved